1.Apple dia voankazo mamy sy azo hanina amin'ny hazo Malus domestic. Izy io dia voankazo boribory izay mety tonga amin'ny habe sy loko isan-karazany toy ny mavo, maitso na mena. Ny paoma dia mazàna mamy ary ny cam dia hohanina vaovao na ampiasaina amin'ny sakafo, saosy, famafazana, ranom-boankazo na paoma malaza. Ny voan'ny paoma dia azo torotoro koa hanalana ny menaka, izay ampiasaina amin'ny indostrian'ny tarehy. Ny voankazo dia misy gliosida, siramamy ary fibre amin'ny ankamaroan'ny proteinina sy tavy tsy azo tsinontsinoavina. Famaritana vokatra ...
Ny sandan'ny sakafo paoma 1, ny paoma dia karazan-tsakafo kely kaloria, isaky ny 100 grama dia mamokatra hafanana 60 kcal. Ny sakafo mahavelona ao anaty soluble, mora entin'ny vatan'olombelona, ​​fantatra amin'ny anarana hoe "rano velona". manampy amin'ny famoahana ny solifara ary hahatonga ny hoditra ho malama sy malefaka. 2, ny paoma dia manana "voankazo fahendrena", anarana fiderana "voankazo fahatsiarovana". Ny fihinana paoma bebe kokoa dia efa ela no nanatsara ny fahatsiarovan-tena sy ny faharanitan-tsaina. Manan-karena siramamy, vitamina, mineraly ary ...
Vidiny fifaninanana Sinoa ambongadiny mena vaovao amidy
1, ny tongolobe dia misy fiatraikany amin'ny fielezan'ny rivotra, satria ny takamoa sy ny ravin'ny tongolobe dia misy karazana menaka miovaova antsoina hoe propylene sulfide, manana tsiro masiaka, ity fitaovana ity dia mahazaka hatsiaka, mahazaka otrikaretina gripa, misy vokarin'ny bakteria mahery. Ny tongolo dia manankarena amin'ny sakafo mahavelona ary misy fofona manitra. Afaka mandrisika ny famoahana ny vavony, ny tsinay ary ny vavonin'ny digestive, mampitombo ny fahazotoan-komana ary mampiroborobo ny fandevonan-kanina. Ankoatr'izay, ny tongolo dia tsy misy tavy. Ny menaka manitra ao aminy dia misy ny fangaro ...